ရေတွင်ကျက်စား ဒေါ်လာငါးများဘ၀ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရေတွင်ကျက်စား ဒေါ်လာငါးများဘ၀
Posted by Khaing Khaing on Feb 14, 2012 in Copy/Paste, Think Different | 11 comments
ကျွန်မစာအရေးအသားတော့မကောင်းပါဘူး ဒီပို့စ်လေးကိုတင်တာ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်းထိခိုက်စေချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး စာနာနားလည်ပေးစေချင်ယုံသက်သက်ပါ..
ကျွန်မ ကသင်္ဘောသားတွေကို သင်္ဘောတင်ပေးတဲ့ ကုမ်ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်.. အဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ ထောနေတဲ့တော့မထင်နဲ့ ကျွန်မတို့လိုင်းကသူများလိုင်းတွေလိုပိုက်ဆံမယူဘူး…(သင်္ဘောသားတွေလာလျှောက်လို့ရတယ်နော်) ကြော်ငြာဝင်တာနဲ့ စကားစလေးပြတ်သွားတယ်..ပြောချင်တာလေးဆက်ပြောလိုက်ဦးမယ် လုပ်တာကြာတာနဲ့အမျှသင်္ဘောသားတွေရဲ့ ဘ၀ကိုနားလည်လာတယ်..သူတို့ဘ၀လေးတွေကသနားဖို့ကောင်းတယ် ..ရေထဲသက်စွန့်ဆံဖျားပိုက်ဆံရှာရ..မိသားစုကအဲအချိန်မှာသူရှာတာလေးတွေနဲ့ အိမ်စရိတ်တွေ သားသမီးတွေအတွက်သုံးတာတွေနဲ့ကုန်ရော..သင်္ဘောသား ကုန်းပေါ်ရောက်ရင် မိသားစုသုံးစရာ ၀င်ငွေမရှိတော့ ပြန်ရောက်တာနဲ့ သင်္ဘောအမြန်တက်ရပြန်ရော.. တစ်ချို့မိသားစုတွေရှိတယ်..ကိုယ့်လင်သားဘယ်လောက်ဒုက္ခခံရတယ်ဆိုတာနားမလည်ဘူး ..ချဲထိုး..အိမ်တွေရောင်း..ယောက်ျားကပြန်လာတော့ နားမယ်ကြံခါရှိသေး နေစရာအိမ်တောင်မရှိတော့ ပင်လယ်ထဲပြန်ဆင်းရပြန်ရော..အဲဒီမိန်းမတွေမေးကြည့်ပါလား..ယောက်ျားငွေကိုအလကားထားမယ့်အတူတူ ပွားအောင်လုပ်တာလို့ပြောလိမ့်မယ်..တစ်ချို့တွေဆို ငယ်တုန်းလုပ်နိုင်တော့မစုမဆောင်းနဲ့ ကြီးလာတော့မှ သင်္ဘောပြန်လိုက်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီး..မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ကုမ်ပဏီကိုလာပြောတယ်.. တစ်ချို့သားသမီးတွေလည်းအတူတူပဲ မိဘကဟိုမှာဘယ်လို့ရှာဖွေနေရတယ်နားမလည်ဘူး ဒီမှာက ပျော်ပါးသုံးဖြုန်းတယ်…ပြသနာမျိုးစုံရှာတယ် အဲဒါအဖေခမျာ နှစ်မပြည့်ပဲသားသမီး အရေးနဲ့သင်္ဘောကဆင်းရပြန်ရော..မြန်မာပြည်ရောက်တော့ သားသမီးကိုဆုံးမဖို့ အိမ်မှာနေရတော့ ပိုက်ဆံမရှာနိုင်ဘူးလေ အဲအချိန်မှာ အကြွေးတွေတင် အကြွေးတင်တော့သင်္ဘောလိုက် ရသမျှပိုက်ဆံကို အကြွေးပြန်ဆပ် ဒီလိုနဲ့အသက်တွေကကြီးသွားတော့တယ်…ကျွန်မတို့ကုမ်ပဏီမှာ အထူးသဖြင့် သနားစရာကောင်းတာ အရာရှိမဟုတ်တဲ့ ရိုးရိုးသင်္ဘောသားလေးတွေပါ..သူတို့ခမျာအကြောင်းကြောင်းကြောင့် အရာရှိဘ၀ကို မရခဲ့ကြဘူး…အဲလိုလူတွေက သင်္ဘောတက်ရဖို့ ကုမ်ပဏီကို အောက်ကျို့ရတယ်..ပေးရကမ်းရတယ်..ကျွန်မတို့ကအဲဒါတွေကို စာနာတယ်သနားတယ်.. သင်္ဘောသားတွေပြန်လာရင် လူတွေပိုက်ဆံတွေ အများကြီးရလာတယ် ထောနေတယ် ဒါပဲမြင်တယ် သူတို့ဘယ်လိုရေထဲမှာ ဒုက္ခခံခဲ့ရတယ် ဒါတွေကိုဘယ်သူမှနားမလည်ကြဘူး မိသားစုနဲ့ဝေးနေရတဲ့အပြင် နေ့ရောညပါ သင်္ဘောပေါ်မှာရှိတဲ့လူစုလေးနဲ့ ဖြတ်သန်းနေ၇တယ် ကျွန်မတို့တောင်အလုပ်လုပ်လို့ အလုပ်ထဲမှာမကျေနပ်တာရှိရင် အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန် မိသားစုနဲ့စိတ်ဖြေလို့ရတယ် သူတို့မှာမကျေနပ်လည်း သည်းခံ ပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ် မိုးလင်တာနဲ့ အဆုံးမရှိပင်လယ် လုပ်နေကျအလုပ်တွေကို နေ့စဉ်ရက်ဆက်လုပ် ပင်လယ်ကြီးက ငြိမ်နေရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့ လှိုင်ထန်လေကြမ်းတွေ့တဲ့အခါ သူတို့ဘယ်လောက်တောင် စွန့်စားခဲ့ရမလဲ ဒါတွေကိုနားလည်ပေးစေချင်တယ် သင်္ဘောသားဟေ့ ထောတယ် အင်ထုမယ် ပိုက်ဆံတောင်းမယ် သူတို့မှာ ကုန်းနဲ့ဝေးနေတော့ ကုန်းပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ် ဒါတွေသူတို့မသိဘူး သင်္ဘောသားတော်တော်များများဟာ ကမ်းရောက်ရင် စီးပွားရေးလုပ်လို့ကတော့ အလိမ်ခံရတာခပ်များများ သင်္ဘောသားတွေပြောနေကျစကားရှိတယ် ငါကကမ္ဘာပတ်လာတာပါတဲ့..ဘယ်လောက်ပဲကမ္ဘာပတ်ပါစေ သူတို့အလည်အပတ်သွားတာပဲရှိတယ် ကုန်းပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေနေတွေကိုမသိဘူး..ကျွန်မတို့ကတော့ အသက်လည်းကြီးမှ မဖြစ်မနေရေထဲဆင်းရတဲ့ သင်္ဘောသားတွေဆို သိပ်သနားတယ် သူတို့ဆီကကျွန်မတုိ့ဘာမှမလိုချင်ဘူး သူတို့သင်္ဘောတက်သွားရရင် သူတို့အဆင်ပြေမယ် သူတို့မိသားစုစိတ်ချမ်းသာမယ်..အဲဒီဝမ်းသာပိတီကုသိုလ်ပဲလိုချင်တယ်..ကျွန်မတို့လိုစိတ်မျိုး ကုမ်ပဏီတိုင်းက၀န်ထမ်းတွေကိုထားစေချင်တယ်…သင်္ဘောသားတွေရဲ့ဘ၀ကိုနားလည်စေချင်တယ်..စာနာစေချင်တယ်..
သဘောင်္သားတွေဘ၀ကို တစ်ဖက် အမြင်နဲ့ ကြည့်ပြီး စာနာနားလည်ထားတဲ့ khaing khaing ရဲ့ ပို့စ်လေးကိုဖတ်ပြီး ပြုံးမိပါတယ် ။
လူတိုင်း လူတိုင်း ဘ၀ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်တစ်ခု လုပ်ရတာ ချည်းပါပဲ … ။ မိဘက သုံးမကုန်အောင် ချမ်းသာနေသည့်တိုင်အောင် ထိုပစ္စည်းဥစ္စာတည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့အတွက်ကတော့ သား၊သမီးဖြစ်သူတွေ အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု လုပ်ပြီး ထိန်းကြရတယ် … ။ ဒီလိုပါပဲ … ကိုယ့်ဘ၀ရပ်တည်ရေးအတွက် …. ကိုယ့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်ကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရပါတယ် … ။ သင်္ဘောသားလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ … ပိုက်ဆံ ရှာနိုင်သူဆိုတဲ့ အသိကပ်ပါလာတတ်တယ် …. ။သူတို့တွေ သနားစရာကောင်းတာက ကောင်းတာ တစ်ပိုင်းပါ ၊ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တာက တပိုင်းပေါ့ … ။ တစ်ချို့လူတွေကလည်း လူအထင်ကြီးအောင် သုံးဖြုန်းပြတတ်တယ် .. သူဘယ်လောက်ရှာနိုင်သလဲဆိုတာကိုပေါ့ … ။ အဲ့ဒီအချိန် သက်စွန့်ဆန်ဖျား ပင်လယ်ထဲက ရှာခဲ့ရပါလားဆိုတဲ့ အသိ မေ့နေတတ်ကြတယ် … ။
အခု အစ်မ ခိုင်ခိုင်ပြောတဲ့ပုံအရဆိုလျှင် … သဘောင်္သားဘ၀က စာနာစရာကောင်းပါတယ် … ။ သို့သော် … တစ်ခုလိုချင်လို့ တစ်ခု စွန့် ရတာ ဓမ္မတာပါ … ။ ကမ်းမမြင် လမ်းမမြင် ပင်လယ်မှာ ရွက်လွှင့်ရတယ် ။ မိသားစုနဲ့ ခွဲပြီး အလုပ်လုပ်ရတယ် … ဘယ်လို အခက်ခဲပဲ ရှိပါစေ ငွေဝင်များတာကြောင့် ဒီအလုပ်ကို လိုချင်သူများကြတယ် ….။ သဘောင်္ပေါ်မှာ အလုပ်လုပ် .. ပြန်လာတော့ စတိုင်အပြည့်နဲ့ … ကလပ်တွေ ၊ မာဆတ်တွေမှာ ငွေရွှင်တဲ့ ဒေါ်လာစားအဖြစ်နဲ့လည်း နေချင်သူတွေ ရှိပါတယ် … ။
ရှာတဲ့ လူက ရှာ ၊ ဖြုန်းတဲ့ လူကဖြုန်းဆိုတာကတော့ .. သဘောင်္သားမှ မဟုတ်ပါဘူး … နိုင်ငံခြားသွားပြီး အလုပ်လုပ်ငွေပို့ရတဲ့ မိသားစုမှာလည်း ဒီလို ပြသနာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ် … ။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေဆို သူတို့မပြန်လာပဲ အိမ်ကို ငွေအကုန်မလွှဲဘူး ..သုံးဖို့လောက်သာ စီစစ်လွှဲပြီး ကျန်တာကို စင်္ကာပူကရုံးမှာ သဘောင်္က ပြန်မှ ၀င်ထုတ်လာကြတယ် … ။
စီးတဲ့ရေ … ဆည်တဲ့ ကန်သင်းဖြစ်ဖို့ရာက … အဓိက မန်းနေ့ခ်ျမန့် လိုတာပါ … ။ ထို ပိုက်ဆံရှာတဲ့လူ သူ့မိသားစုပေါ် ဘယ်လို စီမံခန့် ခွဲပြီး ပိုက်ဆံပေးသုံးလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါသေးတယ် … ။
ပြောရလျှင်တော့ အစ်မခိုင်ခိုင်ရေ …. အနိမ့်ဆုံးလစာရတဲ့ သဘောင်္သားတွေတောင် ကျွန်မတို့ထက် လစာအများကြီးကောင်းပါတယ် …. ။ ကျွန်မကတော့ .. ..သူများလို သဘောင်္လည်းမတတ်နိုင် ၊ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်လည်း … ဘာကိုယ်ပိုင်အလုပ်မှ မလုပ်နိုင်ပဲ …. တစ်လပြည့်မှ တစ်ခါရတဲ့ .. လစာကို မျှော်လင့်ရင်း … တောက်တိုမယ်ရဘ၀နဲ့ … ကျင်လည်နေခဲ့တာမို့ … ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပဲ သနားမိပါတော့တယ် … ။
အိတုန်ရေးတာ မှန်ပါတယ် သင်္ဘောသားတိုင်း ဒုက္ခမရောက်ပါဘူး တစ်ချို့ကလည်ကြပါတယ်.. ဒါပေမယ့် သင်္ဘောသားတွေရလာတဲ့ပိုက်ဆံက ပင်လယ်ထဲမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်လာလို့ရတာကို သိစေချင်တာပါ..ကုန်းပေါ်မှာနေတဲ့သူလောက် ပညာမတတ်ပေမယ့် ရေထဲဆင်းတဲ့အခါ ပိုက်ဆံအများကြီးရတာ သူတို့အနည်းဆုံးလခက မခိုင်တို့ထက်များတာကလည်း သူတို့ပေးဆပ်ရတာတွေက များပါတယ်…. သင်္ဘောသားတွေရဲ့ဘ၀ကို သင်္ဘောသားမိသားစုတောင် နားလည်ချင်မှ နားလည်မှာပါ… သင်္ဘောသားတစ်ယောက်ဆို သူမိသားစုကိုနားသူဘယ်လိုငွေရှာရတာပင်ပန်း တယ်ဆိုတာသိစေချင်လို့ အခွေတောင်ရိုက်လာပါတယ် မိသားစုကလည်း အဲအခါကျမှ မျက်ရည် တွေကျခဲ့ရပါတယ်… အိတုန်ကိုလည်း လစာနည်းလို့ သနားမိပါတယ်..နောက်မှ အိတုန်အကြောင်းကို မခိုင်ဖွဲ့နွဲ့ရေးပေး ပါဦးမယ်….:)
မဟုတ်မှ လွဲရော … မခိုင်ရဲ့ တစ်ယောက်သော သူက သဘောင်္သီးလား .. ဟီးဟီး … (မဟုတ်မှ လွဲရောလို့ ရေးထားတယ်နော် အစ်မ ) နောက်တာ …
အဟီး .. မခိုင်ရေ … ကျွန်မအကြောင်းလေးရေးတဲ့ အခါ … လစာထုတ်ရက်တိုင်း မတိုးလာတဲ့ လစာကိုတွက်ရင်း .. မျက်ရည် ဘူးသီးလုံးလောက် ကျမိတယ်ဆိုတာလေးပါထည့်ရေးနော် … ဇာတ်နာအောင်ပါ .. ဟီးဟီး
မခိုင်ရေ .. သူငယ်ချင်း အပေါင်းသင်းတွေထဲမှာရော ဦးလေးတွေပါ ..သဘောင်္သားလောကကပါပဲ … ။ သဘောင်္ပေါ်မှာ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတာ ပြောပြလို့ သိရတုန်းက သူတို့အခက်ခဲနဲ့ အိမ်လွမ်း စိတ်ကို စာနာမိသေးတယ် … ။ ဒီလည်းရောက်ရော … သူတို့ ပင်ပင်ပန်းပန်း ရှာထားတာမဟုတ်ပဲ … တွင်းထဲက နှိုက်လို့ ရတဲ့ ပိုက်ဆံလိုပဲ .. သုံးလိုက် ဖြုန်းလိုက်တာ .. ဘေးလူကတောင် နှမျောမိတဲ့အထိပါပဲ … ။
အမှန်ပေါ့ဗျာ..ကျုပ်ပါတ်ဝင်းကျင်မှာလဲ တွေ့ဘူးပါရဲ့..သူ့ယောက်ကျားခမျာ ကုန်းပေါ်မှာနေရတယ်ကိုမရှိဘူး
ဘာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးထားပေးတာကို လေးစားပါတယ်..
-လူတိုင်းလူတိုင်းထင်ကြတာ သင်္ဘောသားဆိုရေလျှံတယ်လို့ထင်ကြတယ်။ တကယ်တမ်း ပိုက်ဆံရတယ်မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တန်အောင်လုပ်ရတာမျိုးပါ။ လူကြီးမကောင်းရင် အောက်ကအရာရှိငယ်။ သင်္ဘာသားတွေ ခံရတာတွေလဲရှိတယ်။ လူကြီးညစ်ပတ်လို့ ဖြုတ်လို့ ရာသက်ပန်သင်္ဘောမလိုက်ရတော့လို့ ဘ၀ပျက်ရတာမျိုး။ တစ်ချို့ဆိုကုန်းပေါ်မှာလဲ ရှာမစားတက်တာလဲ အများကြီး။ နောက်ဆုံးမှာ အလိမ်ခံရလို့ မရှိတော့လို့ အချိန်အခါလွန် အသက်တော်တော် ကြီးမှ မျက်နှာငယ်နဲ့ လိုက်ရတာလဲရှိတယ်။
-သူကြီး (Capt) လို၊ CE(သင်္ဘောအင်ဂျင်နီယာချုပ်)လို အရာရှိ တွေမှာလဲ သင်္ဘောသားမကောင်းလို့ စိတ်ထားညံ့လို့ စိတ်ဆင်းရဲတာ၊ အချင်းချင်း အသက်ကိုရန်ရှာတာ တွေမှာ လက်လျှော့ ပြန်ဆင်းရတာ။ လူကြီးဖြစ်ပြီးမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောခံရတာ သိက္ခာကျရတာတွေ။ ကုမ္ပဏီက လူတွေက ကိုယ်ချင်းမစာ သင်္ဘောတောင်မလိုက်ဖူးပဲ လူကြီး လုပ်နေတာမျိုးဆို တကယ်သင်္ဘောသားဘ၀ကို နားမလည်ပဲ ဖြူတ်ပစ်တာ နံမည်ပျက်ရတာရှိပါတယ်။
-ဒါကြောင့် သင်္ဘောသား ဘ၀အကြောင်းပြောရင်မြင်ရတာတွေမှာ ရင်နာ ရပါတယ်။
တော်ရုံဇွဲနဲ့တော့ ပင်လယ်ပျော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တော်တော်ဝါသနာ ပါမှရပါမယ်။ ပင်လယ်ပျော် ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေလဲ ရှေ့မှာရှိတဲ့သူတွေ ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ ကိုမေးပြီးမှကြိုးစားကြစေလိုပါတယ်။ -ပင်လယ်ပျော်တစ်ယောက်မှာပျော်ရွှင်စရာအတွေ့အကြုံတွေလဲရှိပါတယ်။ နိုင်ငံအစုံကိုသွားရ ဒေသအစုံကိုသွားရ နဲ့ သူတို့ဆီမှာဗဟုသုတ၊ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ အများကြီးရှိတဲ့လူလဲရှိပါတယ်။ သူများထက်စာရင် ပစ္စည်း၊ နည်းပညာ အသစ်တွေကို ကိုယ်နိုင်ငံက လူတွေထက်စာရင် ပိုသုံးနိုင်၊ ပိုသိနိုင်တာမျိုးပေါ့လေ အဲလိုလူမျိုးတွေ ကြတော့ ပင်လယ်ပျော်လုပ်ရတာကောင်းပြန်ရော။ -တစ်ချို့ကြတော့ ၀ါသနာက မပါဘူး တစ်ယောက်ယောက်တိုက်တွန်းလို့ သာလုပ်ရတာ စိတ်မပါတပါနဲ့ သင်္ဘောပေါ်ရောက်မှ စိတ်ပါဝါသနာ ပါရတာတွေလဲရှိပါတယ်။
– နောင်ပိုင်းဖြစ်ချင်ကြတဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကို ငွေမျက်နှာ တစ်ခုထဲကိုပဲ မကြည့်ပဲနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ပင်လယ်ပျော်ဘ၀ကို ၀င်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လဲညီမလေး Khaing Khaing ရယ်။ သဘောင်္သားမိသားစုတိုင်းတော့လဲအားလုံးဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ မရှိဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ပေမဲ့ နဲပါတယ်။ သဘောင်္သားမိသားစုတိုင်းယောင်္ကျားရှာသမျှသုံးဖြုန်းနေ တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သဘောင်္သားဆိုတာ သူများတွေထင်နေသလိုလခအများကြီး ရနေ တဲ့ဒေါ်လာ စားတွေဆိုတဲ့ အခြေခံအချက်ကလေးကလွဲရင် လူအများမသိနိုင်တဲ့ ဒုက္ခတွေက အများကြီးပါ။ အမကသဘောင်္သားမျိုးမို့အူမချေးခါးသိပါတယ်။ သဘောင်္သားဆိုတာသဘောင်္ပေါ်နေ ရမှပိုက်ဆံရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ပင်လယ် ထဲမှာဘယ်သူမှအကြာကြီးမနေနိုင်ပါဘူး။ အဲတော့လဲပြန်လာ ရတယ်ပေါ့။ ပြန်ရောက်တဲ့နေ့ကစလို့ဝင်ငွေ ဇီးရိုးဖြစ်သွားပြီ နားနေတဲ့ ကာလတလျှောက်အနှုတ်ပြတော့ တာပဲ။ သာမန်သဘောင်္သားအနေနဲ့ ကအရာရှိတွေလို၂ လ နား။ လနား အဲလိုအာမခံချကမရှိလေတော့ ရုံးမှာတမော့မော့နဲ့နေရတာပါပဲ။ သာမာန်သဘောင်္သားအနေနဲ့ တနှစ်နားလိုက်ရင်ဘာမှမလုပ်အုံးတော့
( ၂ လုံး ၃ လုံး အစရှိသဖြင့် မလုပ်လဲ ) အကြွေးတင်တော့တာ ပါပဲ။ နေ့စဉ် ထွက်ငွေကိုသူတနှစ်ရှာလာ တဲ့ငွေကတောင့် မခံနိုင်ပါဘူး။ အဲတော့လဲအိမ်ပေါင်၊ ငွေချီး လုပ်ရတော့ တာပါပဲ။ အဲတော့စုဆောင်း ဖို့ဆိုတာခက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရိုးရိုးသဘောင်္သားတွေပေါ့။ အသက်ကြီးမှပြန်လိုက်ကြတယ်ဆိုတာ ကလဲမိသားစုမလိမ်မာလို့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ လဲတခြားအကြောင်းတွေ လဲရှိနိုင်ပါတယ်။ သဘောင်္သားဆိုတာ ကလဲသဘောင်္လိုက်တဲ့အလုပ်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့နေ ရာမှာငွေမရှာနိုင် ပါဘူး။ မိသားစုအတွက်လိုအပ် လာပြီဆိုရင် သူလုပ်တတ်တာကလဲဒါပဲဆိုတော့ဒီလမ်းပဲရွေးချယ်ရတာပါပဲ။ အရင်ကဆိုအခွန်ပေး ရတာတော်တော်များတော့ပိုပြီးမကျန်ပါဘူး။ ၁၀ % ဆိုတာတော်တော်များပါတယ်။ ၁ နှစ်တက်လို့ ၁၀၀၀၀ ရရင် ၁၀၀၀ ဆောင်ရတာ။ ၉၀၀၀ ပဲကျန်ပါတယ်။ သဘောင်္ပေါ်မှာလဲနဲနဲပါးပါးတော့ သုံးမိကြတာပါပဲ။ အထူးမဖြင့်တော့သားသမီး၊ မိန်းမ၊ မိသားစုဖို့ကလဲပြန်လာရင်လက်ဆောင် ကလဲဝယ်ချင်ကြသေးတာပဲ။ ဒါကိုဖြုန်းတယ်လို့တော့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ရောက်ရင်လဲပေးရကမ်းရနဲ့ ဘာမှမကျန်ပါဘူး။ ဒါတောင်အိမ်ပြန်မပို့မှနော်။ အိမ်မှာစားစရာမရှိလို့ပြန်ပို့ရရင်ဘာမှကိုမကျန်ပါဘူး။ အဲတော့နားရတဲ့ ကာလတွေမှာရှိတာထုပ်စားတော့မလွယ်ပါဘူး။ အိမ်မှာစီးပွားရေးတခုမရှိပဲနဲ့တော့ သူ့မိန်းမလိမ်မာ အုံးတော့ လုံးခြာလိုက်နေအုံးမှာပါပဲ။ ဒါဟာသာမာန်သဘောင်္သားမိသားစုတွေရဲ့ဘ၀ပါ။ မိန်းမတွေသားသမီးတွေအားလုံးဆိုးသွမ်းကြလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ညီမလေးပြောသလိုရှိတော့ရှိပါတယ်။ ရှားပါတယ်ညီမလေးရယ်။ အပြင်လူတွေမမြင်နိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေသူတို့မှာအများကြီးပါ။
မှန်ပါတယ် မမသဲနုအေး ညီမလိုချင်တာ အဲဒီအချက်တွေကိုပါ နားမလည်တဲ့မိသားစုတွေကို သင်္ဘောသားတွေကိုယ်စား ညီမက ပြောပေးချင်တာပါ..မမကလည်းစုံစုံလင်လင်ထပ်ရှင်းပြထားလို့ သမီးရဲ့ပို့လေး ပိုပြည့်စုံသွားပါတယ် …Thanks
ရေထဲက ဒေါ်လာစားနဲ့ ကုန်းပေါ်က ဒေါ်လာစားများသည်…
ကုန်းပေါ်က ဒေါ်လာစားများက ပိုသနားစရာကောင်းပါသည်…
သူတို့က တစ်နှစ်လောက်နေမှ တစ်ခါခံရတာ…သားတို့က လတိုင်းလတိုင်းခံနေရတာ တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီ…
ဟုတ်ပါတယ်ချင့် သူတို့က အိမ်စရိတ်လည်းမကုန်
စားတော့လည်း ဖရီး ..သောက်စရာကလည်း အချိန်မှန်မှန်ရသေး …
တခြား ဖြုန်းစရာလည်း မရှိ ….။
မိန်းတွေ ကို မ မယ့် မိန်းမလည်း မမြင်ရတော့ ဘာဆိုဘာမှ ကုန်စယာ မရှိ…
များတို့မှာသာ …အဟင့် …..
အော်ဂီရယ် သူများကိုအားကျရင် ရေထဲဆင်းပေ့ါ ဒါမှမဟုတ်လည်း မကုန်သင့်တာတွေမကုန်ရအောင်…မျက်စိမှိတ် နားပိတ် ပါးစပ်ပိတ် နှာခေါင်းတွေပိတ်ထားပေ့ါ ကွယ်…
ခိုင်ခိုင်ရေ…သင်္ဘောသားဘ၀က သနားစရာကောင်းတယ်ဆိုတာအမှန်ပါဘဲ။ ကိုယ့်အမျိုးတွေကသင်္ဘောသားဆိုတော့ သိနေတာပေါ့။ သူတို့ကရှေ့ကရှာ၊ အိမ်ကနေနောက်ကသုံး၊ဖြုန်း။ ကုန်းပေါ်မှာနေတော့ ငွေကမ၀င်ပြန်ဘူး။ အဆိုးဆုံးကသူတို့ဘ၀က safeမဖြစ်ဘူး။ အခုရာသီဥတုကောင်းနေရင်းနဲ့ နောက်ချက်ခြင်း ရာသီဥတုဆိုးသွား…ပြေးစရာမြေမရှိ…။ရေဘဲရှိ..။ဒီကြားတဲ
ပင်လယ်ဒမြရန်ကတမျိုး။ ဘယ်တော့တွေ့မလဲဆိုပြီး။.ဒါကြောင့် ကိုယ်ကကိုယ့်တူတွေကို သဘောသားမလုပ်နဲ့။
နိုင်ငံခြားသွားချင်ရင် show job ဘဲလုပ်လို့ဘဲပြောတယ်။ show job လုပ်လို့ ကိုယ်အောင်မြင်ရင် ကိုယ့်မိသားစုလည်း လိုက်လို့ရတယ်။ မိသားစုနဲ့အိုးမကွာအိမ်မကွာနေလို့ရတယ်လို့ပြောတာ..။ဒါပေမဲ့သူတို့က သင်္ဘောသားဘဲလုပ်ချင်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် အခုဆိုရင် ကိုယ့်တူတွေကိုမတွေ့ရတာ တော်တော်ကြာနေပြီ ။ ကိုယ်ပြန်ရင်သူတို့မရှိ။ သူတို့ပြန်ရင်ကိုယ်မရှိနဲ့လေ.။